पाकिस्तानमा इमरान खानको उदय-Setoghar
पाकिस्तानमा इमरान खानको उदय
- विनोद नेपाल
क्रिकेटर तथा पाकिस्तान तहरिक–ए–इन्साफ (पीटीआई) पार्टीका अध्यक्ष इमरान खान पाकिस्तानका १९औं प्रधानमन्त्री बन्दैछन् । २५ जुलाईमा सम्पन्न त्यहांको संसद ‘नेशनल एसेम्बली’को निर्वाचनमा उनको पार्टीले सबैभन्दा बढी स्थान हासिल गरेपछि उनी प्रधानमन्त्री बन्ने लगभग निश्चित भएको हो । इमरान खानको दल पीटीआईले निर्वाचन सम्पन्न २७० स्थानमध्ये ११६ स्थानमा विजय प्राप्त गरी पहिलो दल बनेको छ । सरकार गठनका लागि उसलाई थप २० सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । स्मरणीय छ, पाकिस्तानको नेशनल एसेम्वलीमा कुल ३४२ सदस्य रहन्छन्, जसमध्ये २७२ प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्छन् । बहुमतका लागि कम्तीमा १३७ सिटमा विजय प्राप्त गर्नुपर्छ । यस निर्वाचनमा २ निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान भएन । यसैले १३६ स्थान पु¥याएमा बहुमत पुग्छ ।
इमरानले नवाज शरीफको पिएमएल–एन र बिलावल भुट्टोको पीपीपीलाई ‘भ्रष्ट’ भन्दै ती दलको समर्थन नलिने बताएका छन् । यसबाट उनले निर्दलीय र साना दलको सहयोग लिई गठबन्धन सरकार गठन गर्न सक्ने देखिन्छ । यसका लागि उनले संवादसमेत थालिसकेका छन् । निर्दलीयसँग १३ सीट छ । दुई नवगठित दल जीडीए र बीएपीले इमरानलाई समर्थन गर्ने संकेत दिएका छन् । उनीहरूसँग २ र ४ सीट छ । आवश्यक समर्थन जुटाएपछि इमरान खानले पाकिस्तानको स्वतन्त्रता दिवस अगस्त १४ अघि नै प्रधानमन्त्री पदको सपथ लिने सम्भावना छ । पाकिस्तानको संविधानमा राष्ट्रपतिले नेशनल एसेम्वलीको पहिलो बैठक निर्वाचनको २१ दिनभित्र आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज) समेतका दलहरूको २७ जुलाईमा बसेको बैठकले निर्वाचन परिणामलाई अस्वीकार गर्ने बताएको छ । बैठकमा सहभागी दलहरूले पुनः पारदर्शी निर्वाचनको माग गरेका छन् । उनीहरूले मुलुकभरी विरोध प्रदर्शनको घोषणा पनि गरेका छन् । यस बैठकमा यसपटकको निर्वाचनमा सहभागी भई नराम्ररी पराजित भएका दलहरूको सहभागिता थियो भने पाकिस्तान पिपुल्स पार्टी र मुताहिदा कौमी मुभमेन्ट भने यसमा भाग लिएनन् । असन्तुष्ट दलहरूले मतगणनाको तरिका तथा परिणाम घोषणामा गरिएको ढिलाईप्रति समेत असन्तुष्ट छन् । यस सन्दर्भमा आगामी केही दिन पाकिस्तानको राजनीतिका लागि महŒवपूर्ण हुने र धेरै स्थानमा विजय प्राप्त गरेको दलका विरुद्ध एक हुने स्थिति आएमा त्यसले राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न गर्ने अनुमान गरिएको छ ।
को हुन् इमरान खान ?
इमरान खानको जन्म २५ नोभेम्वर १९५२मा लाहोरको एक पस्तुन परिवारमा भएको हो । उनले आफ्नो शिक्षा लाहौरको एचिसन कलेजबाट गरेका थिए र सन १९७५ मा लन्डनको अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीबाट स्नातक गरे । इमरानले दर्शन, राजनीति शास्त्र र अर्थशाश्त्रमा स्नातक गरेका छन् । गजब के छ भने सन १९९६ मा पार्टी गठन गरी राजनीतिमा प्रवेश नगरेसम्म उनले मुलुकमा भएका कुनै पनि निर्वाचनमा मतदान गरेका थिएनन् ।
राजनीतिमा आएपछि उनले जनरल परवेज मुसर्रफ र आसिफ अलि जरदारी जस्ता सत्ताधारी नेता र तिनका अमेरिकी तथा बेलायती निकट विदेश नीतिको विरोध तथा प्रदर्शन गराउन थाले । सन् १९९६ मा पार्टी गठन गरेर त्यसका अध्यक्ष बनेका उनी यस्तै गतिविधिका कारण पाकिस्तानको राष्ट्रिय नेताको पहिचान बनाउन सफल भए । सन् २००२ मा उनले पहिलोपटक नेशनल एसेम्वलीको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरे । सन् २००७ सम्म प्रतिपक्षमा रहे । २०१३ मा उनी पुनः संसदमा पुगे । त्यतिखेर उनको पार्टी पाकिस्तानको दोस्रो ठूलो दल बनेको थियो । इमरानले यसपाली तेस्रोपटक चुनावी प्रतिस्पर्धा गरेका हुन् ।
इमरान खानले १३ वर्षको उमेरदेखि नै क्रिकेट खेल्न थालेका थिए । पहिले उनी आफ्नो कलेजका लागि खेल्थे । १८ वर्षको उमेरमा पहिलोपटक पाकिस्तानी टिमका तर्फबाट सन् १९७१ मा वर्मिङघमको इंग्लिस सिरीजमा खेलेका थिए । अस्कफोर्डबाट स्नातकको योग्यता हासिल गरेपछि इमारान खान सन् १९७६ मा पाकिस्तानको राष्ट्रिय टीममा सामेल भए । उनको क्रिकेट यात्रा सन १९९२ सम्म रह्यो । उनी सन १९८२ देखि लगातार १० वर्षसम्म कप्तान रहे । सन् १९९२ मा उनकै तेतृत्वमा पाकिस्तानले विश्व कप क्रिकेटमा विजय हासिल गयो । क्रिकेट खेलबाट सन्यास लिएपछि सन् १९९४मा उनले आफ्नी आमाको सम्झनामा २ करोड ५ लाख डलरको लगानीमा लाहौरमा एक क्यान्सर अस्पताल स्थापना गरे । त्यसपछि सन् २०१५ मा पेशावरमा दोस्रो अस्पताल बनाए ।
इमरान खानले तीन विवाह गरेका छन् । पहिलो विवाह सन् १९९५ मा ब्रिटिस नागरिक जेमिमा गोल्डस्मिथसँग गरे । उनीसँगको सम्बन्ध २००४ मा विच्छेद भयो । यसपछि सन् २०१५ मा उनले टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोता रेहम खानसँग दोस्रो विवाह गरे । तर यो विवाह केवल १० महिना टिक्यो । तेस्रो विवाह यसै वर्ष बुशरासँग गरेका हुन् ।
इमरान खान विभिन्न विवादमा पर्दै आएका छन् । उनी सबैभन्दा बढी लागू औषधसँग जोडिएर विवादित भएका छन् । उनको टिमका खेलाडीहरूले नै यो कुरा खुलाएका हुन् । सन् १९८७ मा पाकिस्तानका वरिष्ठ खेलाडी कासिम उमरले इमरान लागू औषधको प्रयोग गर्छन् भन्ने कुरा खोलेका थिए । यतिमात्र होइन, उनका टिमका अन्य खेलाडी पनि लागू औषध प्रयोग गर्ने बताइएको थियो । यसको अनुसन्धान भएपछि यत्तिकै छाडिएको थियो कुनै कारवाही गरिएको थिएन । कुनैकुनै खेलाडीले इमरानलाई ‘अय्याशी’को आरोप लगाउने गरेका छन् । उनी महिलासँगको सम्बन्धका कारण पनि विवादित छन् । उनकी दोस्रो पत्नीले नै उनीमाथि पाँच अवैध सन्तान भएको आरोप लगाएकी छन् । सन् १९९० को दशका पाकिस्तान क्रिकेटका कतिपय खेलाडीले इमरानलाई जिद्दी र खराब आचरण भएको व्यक्ति ठान्थे ।
पूर्व प्रधानमन्त्री नवाज शरीफको पद खोसिनुदेखि उनलाई कैद सजाय हुनुसम्ममा इमरानको निकै ठूलो भूमिका छ । सन् २०१३ मा सम्पन्न निर्वाचनपछि उनले भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन चलाए, जसले शरीफलाई पद छोड्न बाध्य बनायो । इमानरले अघिल्लो निर्वाचनमा नवाज शरीफमाथि धाँधलीको आरोप लगाएका थिए
प्रधानमन्त्री पदमा आसीन हुँदा इमरान कुनै मुलुकको सर्वोच्च पदमा पुग्ने तेस्रो व्यक्ति हुनेछन् । यसअघि फुटबल खेलाडी जर्ज बी लाइवेरिया र पूर्व वक्सर इदी अमीन युगाण्डाका राष्ट्रपति बनिसकेका छन् । जर्ज बी यसै वर्ष २२ जनवरीमा लाइबेरियाका २५औं राष्ट्रपतिका रूपमा चुनिएका हुन् । उनी विभिन्न क्लबबाट फुटबल खेल्थे । इदी अमीन चाहिँ सन् १९५१ देखि १९६० सम्म लाइट हेभीवेट वक्सिङ च्याम्पियन थिए । इदी अमीन सन् १९६२ मा युगाण्डाको सेनामा प्रवेश गरेका थिए । यसअघि उनी ब्रिटिस आर्मीमा थिए । सन् १९७१ मा युगाण्डाको तेस्रो राष्ट्रपतिका रूपमा सत्तासीन भई उनले सन् १९७९ सम्म शासन गरे ।
पूर्व प्रधानमन्त्री नवाज शरीफको पद खोसिनुदेखि उनलाई कैद सजाय हुनुसम्ममा इमरानको निकै ठूलो भूमिका छ । सन् २०१३ मा सम्पन्न निर्वाचनपछि उनले भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन चलाए, जसले शरीफलाई पद छोड्न बाध्य बनायो । इमानरले अघिल्लो निर्वाचनमा नवाज शरीफमाथि धाँधलीको आरोप लगाएका थिए । सन् २०१३ मा इमरानको पार्टीले पहिलोपटक खैबर पख्तूनख्वा प्रान्तमा सरकार बनाएको थियो । यसपटकको निर्वाचनमा इमरान खान ‘न्यू पाकिस्तान’को नाराका साथ चुनावी मैदानमा उत्रिएका थिए । इमरानले पाकिस्तानका जनतालाई भ्रष्टाचारबाट मुक्ति दिलाउने विश्वास दिलाएका छन् ।
सम्पन्न निर्वाचनको जनादेशलाई पूर्व प्रधानमन्त्री नवाज शरिफले ‘चोरीको जनादेश’ भनेका छन् । उनले परिणाम संदिग्ध रहेको र यसले देशको राजनीतिलाई दूषित गर्ने बताएका छन् । आडियाला जेलमा कैद गरिएका पीएमएल–एनका पूर्व प्रमुख शरिफले फैसलाबाद, लाहौर र रावलपिण्डीका चुनाव परिणाममाथि आशंका व्यक्त गरेका हुन् । अवैध सम्पत्ति आर्जन मुद्दामा दोषी ठहरिएका उनी निर्वाचन अघि बेलायत निर्वासनबाट स्वदेश फर्केकामा विमानस्थलबाटै छोरीसहित पक्राउ गरी जेल पठाइएको थियो । उनले ती क्षेत्रमा आफ्नो दलका उम्मेदवारहरूको स्थिति राम्रो भएपनि तिनलाई पराजित घोषणा गरिएको र खैबर पख्तूनख्वा प्रान्तमा पूर्ववर्ती सरकारका कामकाज खराब भएपनि इमरान खानको पार्टीका उम्मेदवारलाई विजयी गराइएको प्रति उनले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
पाकिस्तानमा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले पूरा कार्यकाल शासन गर्न पाएका छैनन् । कहिले सेना र कहिले अदालतले उनीहरूलाई पदमुक्त गरेको छ । वंशवाद र भ्रष्टाचार त्यहाँको समस्या हो । यसपटक भिन्न चरित्र बोकेका इमरान खानले आफूलाई अगाडि ल्याउन सफल भएका छन् । तर उनको पछाडि सेना रहेको र केही कट्टरपन्थीहरूको समेत उनीप्रति समर्थन रहेको छ । क्रिकेटबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेका इमरान पाकिस्तानी सेनाको निकट मानिन्छन् । पाकिस्तानी समाजलाई सञ्चालन गर्न यिनै दुईको प्रमुख भूमिका रहेको मानिन्छ । चुनाव प्रचारका क्रममा इमरानले सेनाविरुद्ध एक शब्द पनि नबोलेका बरू पूर्वप्रधानमन्त्री नवाज शरिफमाथि सेनालाई कमजोर बनाएको आरोप लगाएका थिए । यसले पनि इमरान सेनाको नजिक रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । भनिन्छ, सम्पन्न निर्वाचनमा त्यहाँको सेनाले उनलाई पूरा सहयोग ग¥यो ।
उता दक्षिण एसिया मामला विशेषज्ञ तथा अमेरिकी गुप्तचर संस्था सीआईएका पूर्व विश्लेषक ब्रुस रिडेलले इमरान सत्तामा आउनु विश्वको सबैभन्दा खतरनाक देश अझ खतरनाक हुनु हो भन्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले इमरान सबैभन्दा ठूला अमेरिका विरोधी दक्षिण एसियाली नेता भएको पनि बताएका छन् । तर उनले गठबन्धन सरकार टिकाउ हुनेमा भने आशंका गरेका छन् । भारतको सम्बन्धमा परस्पर आरोप प्रत्यारोप गरिरहेमा सम्बन्ध राम्रो हुन नसक्ने बताए भने साउदी अरव तथा इरानलाई पाकिस्तानको पुराना र विश्वसनीय मित्रको संज्ञा दिएका छन् । उनले पाकिस्तानलाई शान्ति चाहिएको भन्दै उनले यसका लागि अमेरिकाको आवश्यकता नपर्ने बताएका छन् ।
अन्त्यमा, इमरानले निर्वाचनको समयमा पाकिस्तानलाई भारतभन्दा अगाडि लैजाने भन्दै युवाहरूलाई आकर्षित गर्न प्रयास गरेका थिए । पाकिस्तानी मतदाताले आतंककारी भनिएका हाफिज सईदको पार्टी अल्लाह ओ अकबर तहरीक (एएटी) का सबै उम्मेदवारलाई पराजित गरिदिए । अब इमरान खानको भने परीक्षा प्रारम्भ हुनेछ । उनीमाथि सेनाको दबाब रहनेछ । यस्तो अवस्थामा अब पाकिस्तानले भारतसँगलाई कसरी कायम राख्छ ? आतंकवादलाई कसरी नियन्त्रण गर्छ ? त्यो भने प्रतीक्षाकै विषय छ ।